စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Transsion Tecno က သင့်တင့် တဲ့ ဈေး နှုန်းနဲ့ Spark 8 ကို အိန္ဒိယ မှာ မိတ်ဆက် - Pandaily
Categories: Smartphones ကိုPandaily နိုဝင်ဘာ 12, 2021 နိုဝင်ဘာ 12, 2021 မှာ Posted
တရုတ် စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီ Transsion Holdings ရဲ့ Tecno ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က မိတ်ဆက်အိန္ဒိယ မှ Spark 8 ဖုန်း များEntry-level specification ကိုရွေးချယ် တဲ့အခါ သင့်တင့် တဲ့ ဈေး နှုန်းနဲ့ မှတ်သား ထားပါတယ်။
Tecno Spark 8 မွာ ေက်ာ ဘက္ ကင္မရာ ႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ ထားၿပီး 16-megapixel main sensor ကို f/1.8 aperture နဲ႔ တပ္ဆင္ ထားပါတယ္။ ကင်မရာ ပိုင်း မှာတော့ AI beautification feature, gesture control shooting, AI portrait mode, HDR, AR shooting, delay mode, panorama mode, slow motion mode တို့ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။ အေရွ႕ ဘက္မွာ 8-megapixel ကင္မရာ တပ္ဆင္ ေပးထားၿပီး Selfie နဲ႔ Video Chat ႏွစ္ခု စိတ္၀င္စား စရာေကာင္း တာက ဒီ စမတ္ဖုန္း ရဲ႕ ေနာက္ ဘက္ လက္ေဗြ ရာ module ဟာ ကင္မရာ module ရဲ႕ ညာဘက္ ေအာက္ ေထာင့္ မွာ ရွိေန တာမို႔ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနပါတယ္။
Tecno Spark 8 မွာ ၆. ၅၆ လက္မ HD Display တပ္ဆင္ ထားၿပီး Water Drop Notch ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ ဖုန္း ရဲ႕ brightness ကေတာ့ 480 nits ျဖစ္ၿပီး standard refresh rate ကေတာ့ 60Hz ျဖစ္ပါတယ္။ ၎င်းသည် အနည်းငယ် လေးလံ ပြီး အထူ ၉. ၂ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၇၆ မီလီမီတာ နှင့်အမြင့် ၁၆၅ မီလီမီတာ ရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်း မှာတော့ ဖုန်း မှာ MediaTek Helio G25 Chipset ကို အသုံးပြု ထားပြီး 3GB LPDDR4X Memory နဲ့ 64GB Storage ပါဝင်ပြီး microSD Card နဲ့ 256GB အထိ တိုး နိုင်ပါတယ်။ HyperEngine နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီး ဂိမ္း ကစား ရာမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ ေစပါတယ္။
Tecno Spark 8 တွင် 5000mAh ဘက်ထရီ နှင့် စိတ်ကြိုက် Android 11 operating system HIOS 7.6 တပ်ဆင်ထားသည်။ သူ႕ရဲ႕ connection feature ေတြကေတာ့ 4G LTE, dual-frequency Wi-Fi, Bluetooth 5.0 နဲ႕ GPS တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
RAM 3GB နဲ့ Storage 32GB ပါဝင်တဲ့ Tecno Spark 8 ရဲ့ ဈေးနှုန်း ကတော့ အိန္ဒိယ မှာ အိန္ဒိယ ရူပီး ၉၂ ၉၉ (ဒေါ်လာ ၁၂၅) ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် သုံးမျိုး-အပြ ာ၊ အစိမ်း နှင့် ခရမ်းရောင်-ဖောက်သည် များ ရရှိနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tecno Spark 7P & Spark7Pro ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ခြင်း
ယင္း မတိုင္မီ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ညေနတြင္ Transition Holdings က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ သံုးလ ပတ္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏လည်ပတ်မှု ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၃၅. ၇ ၇၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၆ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၃. ၂၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၂. ၈ ၈၂ ဘီလီယံ ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၇. ၄၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထပ်တလဲလဲ မဟုတ်သော အမြတ် နှင့် ဆုံးရှုံး မှုများကို နုတ်ယူ ပြီးနောက် အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၂. ၅ ၃၉ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ထက် ၄၅. ၂၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စွမ်းဆောင်ရည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်မှု နှင့်စပ်လျဉ်း။ Transsion Holdings က အာဖရိက စျေးကွက် တွင် အပြိုင်အဆိုင် အားသာချက် ကိုထိန်းသိမ်း ထားသော်လည်း ကုမ္ပဏီသည် အာဖရိက ပြင်ပ ရှိ စျေးကွက် များကို တက်ကြွစွာ တိုးချဲ့ သည်၊ ထုတ်ကုန် စွမ်းအား ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက် စေသည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်း မှုများနှင့် nbsp ကိုတိုးမြှင့် သည်။ – ရလဒ်အနေဖြင့် ရောင်းအား တိုးလာသည်။